"Anigu Khamri Waan La Cabi Karayay Klopp Kulanka Kaddib Laakiin......" - Lampard Oo Wali Ka Cadhaysan Liverpool & War Cusub Oo Kasoo Yeedhay - Gool24.Net
“Anigu Khamri Waan La Cabi Karayay Klopp Kulanka Kaddib Laakiin……” – Lampard Oo Wali Ka Cadhaysan Liverpool & War Cusub Oo Kasoo Yeedhay
Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa qirtay inuu ka qoomamaynayo qayb kamida doodii kululayd ee habeenimadii Arbacadii dhex martay isaga iyo qaar kamida shaqaalaha tababarka Liverpool oo uu ku jiro tababare Jurgen Klopp.
Dhinaca kale Lampard ayaa sheegay in qaar kamida shaqsiyaadka fadhiyay keydka Liverpool ay kasoo gudbeen xadkooda isaguna uusan ahayn mid ka xun inuu difaacay kooxdiisa.
Lampard ayay kaameradu qabatay isaga oo cadhaysay oo ay hadalo is-dhaafsanayaan qayb kamida dadkii fadhiyay keydka Liverpool kahor intii uusan goolkii labaad ee ciyaarta laad xor ah oo cajiib ah ku dhalinin Trent Alexander Arnold.
Lampard ayaa ka cadhaysnaa qalad lagu dhigay khadka dhexe ee kooxdiisa ee Mateo Kovacic kaddib cadaadis uu saaray garabka Liverpool ee Sadio Mane taas oo dhalisay inay isku dhacaan tababare caawiyaha Reds ee Pep Lijnders.
Haatan shirka jaraa’id ee uu qabanayo kahor kulanka Axada ee Wolves, Frank Lampard ayaa la weydiiyay wax ku saabsan dhacdadii Khamiistii.
Macalinka ree England ayaa sheegay inuu sidaas si ka wanaagsan arrinta ula tacaali karayay oo uu uga qoomamaynayo sababta carruurtiisa oo baraha bulshada isticmaala balse uusan wax qoomamo ah ka qabin inuu kooxdiisa difaacayay.
Lampard ayaa hadalkiisa ku bilaabay “Waxaan arkay muuqaalka, halkaas ayaan joogay, marka la eego dhinaca erayada aan adeegsaday waan qoomamaynayaa sababtoo ah waxaan haystaa laba hablood oo yar yar oo baraha bulshada ku jira”
“Marka laga eego dhinaca xamaasada ah inaan difaaco kooxdayda? Maya (Ma qoomamaynayo), si ka duwan ayaan ula tacaali karayay”
“Khamri ayaan la cabi karayay Jurgen Klopp kulanka kaddib si aan u sharfo guushooda, laakiin waxa jiray waxyaabo aanan ka jeclaysan keydkooda, maaha Jurgen Klopp balse keydkooda”